Hisokatra ny 24 Jiona | ny Apple Store Tower Theatre any Los Angeles Avy amin'ny mac aho
Toerana vaovao izay hiafara amin'ny maha iconic anao ary maninona no tsy izy, sainan'ny Apple Store any Los Angeles. The Apple Tower Theatre, Saika hamita ny sanganasany ary hisokatra amin'ny besinimaro amin'ny 24 Jona. Tsara hatrany ny manome vaovao toa izao. Toa miverina somary mandeha amin'ny laoniny ny fiainana alohan'ny areti-mandringana izay ny vaovao lehibe dia ny fanidiana ny fivarotana noho ny famerana noho ny virus sy ny tahan'ny aretina.
Ny 24 jona ho avy izao, Apple mikasa ny hanokatra magazay vaovao any Los Angeles izay toa ho lasa iray amin'ireo hametraka tantara izany. Ny toerana ao aminy dia efa manokana. Ka manana bileta maro izy io ho lasa zavatra miavaka. Ilay fivarotana Teatra Apple Tower Any amin'ny teatra manan-tantara ao amin'ny Distrika Broadway Theatre any Los Angeles izy io. Rehefa misokatra izy io dia izy no fivarotana Apple voalohany eto afovoan-tanàna Amerikanina.
Raha vao sinema vaovao, Apple Tower Theatre dia maneho ny famoronana sy ny fanavaozana izay samy fanta-daza an'i Los Angeles sy Apple. Apple Store voalohany ao afovoan-tanànan'i Los Angeles, io no toerana hahitanao vokatra vaovao, mahita aingam-panahy ary avelao hamirapiratra ny fahaiza-mamorona anao.
Apple dia nanavao ny Tower Theatre nandritra ny taona maro. Tamin'ny taona 2018, nizara fanesoana momba ny mety ho endrik'ilay atitany ny orinasa. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza ny orinasa fa eo an-tampon'ny Apple Stores ny toerana ary tsy hitovy amin'ny zavatra hafa rehetra eto an-tanàna. Ny sasany amin'ireo famolavolana dia mety hampiditra ny maritrano Renaissance manan-tantara amin'ny teatra, ary koa mampiditra fikitihana teatra vaovao. Ny fivarotana ara-batana dia hampiantrano hetsika natao hisarika olona an-jatony. Handray ny andraikitr'i Los Angeles amin'ny maha foibe ara-kolontsaina sy haino aman-jery azy ity magazay ity handraisana lahateny manampahaizana momba ny fahitalavitra, sarimihetsika ary mozika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Hisokatra ny 24 Jona ny Apple Store Tower Theatre any Los Angeles